Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || मधुमेह रोगः के हो ? के होइन ? – kayakairan.com
मधुमेह रोगः के हो ? के होइन ?
आज विश्व मधुमेह दिवस मनाइदैछ । हरेक वर्ष नोभेम्वर १४ मा यो दिवस विश्वभर एउटा न एउटा नारा दिएर मनाउने गरिएको छ । यसपालि यो दिवसका लागि ‘महिला र मधुमेहः स्वस्थ भविष्य हाम्रो अधिकार’ नारा दिइएको छ । सन् १९९१ बाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
मधुमेह रोगी विश्वव्यापीरुपमा अहिले निकै बढिरहेका छन् । रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकता भन्दा बढी हुने अवस्थालाई मधुमेह अर्थात चिनीरोग भएको भन्दछौँ । हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन भन्ने हर्मोन हुन्छ । यो हर्मोन पेटमा अर्थात पेङ्क्रियाजले उत्पादन गर्छ । यसको उत्पादन कम भयो भने या हर्मोनले राम्रोसँग काम गर्ने अवस्था भएन भने रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढेपछि मधुमेह रोग लागेको भन्छौँ । यसको समयमा सहि उपचार हुन सकेन भने विभिन्न जटिलताहरु ल्याउँछ ।
शरीरमा इन्सुलिन भन्ने तत्व हुन्छ, जसले जीवकोषहरुमा चिनीलाई नियन्त्रण गर्छ । इन्सुलिनको उत्पादन नभएको अवस्थामा मधुमेह हुन्छ । यो प्रकारको मधुमेह धेरै कम व्यक्तिहरुलाई हुन्छ । योखाले मधुमेह सामान्यतया ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसलाई लागेको पाइन्छ । यो मधुमेह देखिएपछि बाँच्नका लागि इन्सुलिन दिनैपर्छ । औषधिले काम गर्दैन । यो जन्मजात भन्न मिल्दैन जन्मेको केही बर्षपछि बच्चाहरुमा यस्तो अवस्था देखिन्छ ।
यसमा इन्सुलिन निस्के पनि यसको काम गराइमा कमी आएको हुन्छ । यसले गर्दा चिनीहरु जीवकोषहरुमा पस्न नपाएर रगतमै घुमिबस्छन् र विभिन्न अंगमा क्षति पु¥याउँदै लैजान्छन् । यो प्रकारको मधुमेह धेरैलाई हुन्छ । योखाले मधुमेह सामान्यतया ३५ वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई लागेको पाइन्छ । तर, हिजोआजको जीवनशैली र खानपानका कारण कम उमेरमै पनि यस्तो देखिएको छ । अहिले बच्चाहरुमै मोटोपन बढेकोले प्रकार दुईवाला मधुमेह देखिन थालेको बताइन्छ । नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ ।
यो बाहेक गर्भवतीलाई देखापर्ने मधुमेह रोगपनि हुन्छ । गर्भवती भएको बेला रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुने अवस्थाले गर्दा आमा र बच्चा दुवैलाई असर गर्न सक्छ ।
यो एक नसर्ने रोग हो । विश्वमा अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै मान्छे मर्ने कारणहरुमध्ये मधुमेह सातौं नम्बरमा पर्छ । हुन त कहिंकतै सानो उमेर समूहमा पनि मधुमेह रोग फेला परेका हुन्छन् । तर, सामान्यतया यो रोग ३५ देखि ६० वर्ष उमेरका मान्छेहरुमा बढी देखिन्छ । नेपालजस्तो अविकसित देशमा यो रोगबाट प्रभावित हुने महिलाको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।
विश्वमा अहिले करिब ४० करोड मान्छे मधुमेह रोगबाट प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि फिजी र साउदी अरबमा मधुमह रोगीको संख्या बढी पाइन्छ । सोभियत संघका देशहरुमा भने यो दर एकदमै कम छ । अझै चीन र भारतलाई त मधुमेहको राजधानी भने पनि हुन्छ । त्यहाँ अत्यधिक संख्यामा महुमेह रोगी पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै डरलाग्दो अवस्था हुँदै गएको देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा औसतमा ८ प्रतिशत जनसंख्यामा मधुमेह रहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये सहरी जनसंख्याको २५ प्रतिशत र गाउँ क्षेत्रमा ३ देखि ५ प्रतिशत मान्छेमा मधुमेह फेला परेको छ । चितवनमा सबैभन्दा बढी पूर्वी चितवनको बछौलीमा देखिएका छन् । त्यहाँ गरिएको एक अध्ययनमा २७५ जनाको परीक्षण गर्दा १५ वर्षमाथिका १७ प्रतिशत मानिस यो रोगबाट प्रभावित भेटिएका थिए ।
मधुमेह रोग लागेको लक्षण
मधुमेह रोग पहिल्यै लक्षण देखिएर लाग्न पनि सक्छ, लक्षण विना नै लाग्न पनि सक्छ । विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएको छ भने मधुमेह भएकाहरुमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतले आफूलाई मधुमेह भएको छ भनेरै थाह पाउन सक्दैनन् । किनभने लक्षण नै हुँदैन कतिपयलाई । तर, सामान्यतया यसका लक्षण निम्न हुन्छन् ः
–खाना रुचेर पनि तौल घट्दै जाने ।
–पिसाव सामान्यभन्दा धेरैपटक लाग्ने ।
–मुख सुख्खा हुने, प्यास धेरै लाग्ने
–भोक बढी लाग्ने तर दुब्लाउँदै जाने
–कमजोरी हुने र खुट्टा झम्झमाउने
–पिसावमा कमिला देखिने
–घाउहरु छिटो निको नहुने
मधुमेहले महिला पुरुष भनेर भेदभाव गर्दैन । न धनी न गरीब, न त जात धर्म वर्ण, न उमेर र लिंग सबैमा यो रोग देखिन्छ । यदि समयमै सतर्कता अपनाइएन भने यसले ज्यानसमेत लिने डर हुन्छ । लक्षणको आधारमा यसको पहिचान सहज हुन्छ । तर, लक्षण नदेखिकन रोग लाग्यो भने समस्या पर्छ । त्यसैले हरेक स्वस्थ मानिसले सके ६ महिनामा एकपटक नसकिएमा पनि एक वर्षमा एक पटक मधुमेहको जाँच गराउनै पर्छ । हरेक व्यक्तिले ३० वर्षको उमेर कटेपछि त झनै अनिवार्य जचाउनै पर्छ ।
मधुमेहले के गर्छ ?
मधुमेह भएर नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने यसले धेरै अंगलाई असर गर्न सक्छ । टाउकोदेखि खुट्टासम्म त्यममध्ये प्रायः देखिने एउटा असर भनेको आँखामा हुने गर्छ । आँखाको पर्दालाई असर गर्छ । त्यहाँ असर गरेर रगत जम्छ । त्यसपछि त्यो आँखा च्यातिने र अन्धोपनमा हुन जाने हुन्छ । नेपालमा मधुमेहका कारणले हुनसक्ने अन्धोपनको सम्भावना २५ गुणा बढी हुन्छ । अर्को असर मिर्गौलामा असर गर्छ । मिर्गौलाबाट प्रोटिन लिक गराएर मिर्गौला फेल हुने सम्भावना पाँच गुणाले बढ्छ । मुटु हृदयाघात, मस्तिस्कघात तथा पक्षघात हुने सम्भावना दोब्बर हुन्छ ।
त्यसपछि खुट्टाको नसालाई समेत असर गरेर खुटाको घाउन निको नहुने र खुटामा काट्नुपर्ने सम्भावना २० गुणा बढी हुन्छ । यी मुख्य हुन् । तर, अन्य फुटकर असरहरु भइरहन्छ । यसले पिसावमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढाउँछ । पिसाव वा निमोनियाहरु भइरहन्छ । पेटको समस्या भइरहने, कसैलाई झाडापखला, कसैलाई कब्जियत भइरहने हुन्छ । कसैलाई उल्टी भरहने । कसैलाई डिप्रेसन पनि ल्याउन सक्ने हुन्छ । यसकै कारणले कतिपयमा र्यानिच्छामा कमी आउने या यौन दुर्वलता बढाउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
प्रकार दुई मधुमेह मुख्य त दुई प्रकारले हुन्छ । एउटा वंशजको आधार अर्थात परिवारको एक सदस्यलाई भयो भने त्यो जिनको आधारमा सन्तानहरुमा देखिने हुन्छ । यस्तो सम्भावना ५० प्रतिशत रहन्छ । अर्को भनेको जीवनशैली नै हो । त्यो भनेको मोटोपन नियन्त्रण हुन नसक्ने, व्यायममा कमी, खानपानमा गडबढी नै हो । चिल्लो गुलियो र क्यालोरी भएको खानेकुरा नै दुम्मन हुन् ।
वंसाणुगत समस्या भएपनि जीवनशैली सुधार्नु भयो भने नरहने सम्भावना पनि हुन्छ । तर, मेरो वंशजमा छैन भनेर जीवनशैली सुधारेन भने हुने सम्भावना बढी हुन्छ । पेटको गोलाइ बढी हुनु, अव्यवस्थित खानपान हुनु, व्यायामको कमी हुनुका कारण हामीलाई मधुमेह हुने सम्भावना बढी हुन्छ । वंशाणुगतरुपमा त हामीलाई यसैपनि मधुमेह हुने सम्भावना रहन्छ । हामीले जीवन शैलीमा सुधार ल्याएर, व्यायाम गरेर, स्वस्थ भोजन गरेर पेटको गोलाइ बढ्न दिएनौं भने हामीले मधुमेहलाई अलि पर राख्न सक्छौं ।
कसरी जाच्ने ?
सामान्यतया स्वस्थ मान्छेमा खाली पेटमा रगतको जाँच गर्दा सुगर लेभल १०० भन्दा कम या कुनै पनि बेला अर्थात रेन्डम जाँच गर्दा १४० भन्दा कम हुनुपर्छ । मधुमेह रोग लाग्यो भन्नलाई खाली पेटको जाँच गर्दा सुगर लेभल १२६ भन्दा माथि र खाना खाएपछि २०० भन्दा माथि पुग्नुपर्छ । यो बीचको लेभल अर्थात खाली पेटमा १०० देखि १२५ सम्मको अवस्था र खानापछिको १२६ देखि १९९ सम्मको अवस्थालाई प्रिडायबिटिजको अवस्था अर्थात मधुमेह हुने सम्भावना भएको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ ।
सामान्य खानपान अपनाउनु नै राम्रो हो । तर, त्यसमा विचार पुरयाउनुपर्छ । क्यालोरी भएको चिज अर्थात भात, मैदा, आलु, गुलियो चिल्लो फ्याट बढी हुने चिजहरुको कम सेवन गर्नु राम्रो ।
गुलिया खानेकुरा शरीरका लागि हानिकारक हुन्छन् । बढी चिनी हाम्रो जिउले पचाउन सक्दैन । जुन प्राकृतिक रुपमा केरा, सुन्तला लगायत फलफूलमा पाउनुहुन्छ । मधुमेह खासगरी पेटको गोलाइ बढ्नाले र अस्वस्थकर खानाले हुने गर्छ । बढी चिनी हाम्रो शरीरले पचाउन सकेन भने त्यो फ्याटमा परिवर्तन हुन्छ । पछि गएर त्यसले चिनीरोग मात्रै होइन, मुटुरोगको जोखिमलाई पनि बढाउँछ । गुलिया मिठाइ मात्रै नभएर कोक, फ्यान्टा, जुसले पनि मधुमेह हुन सक्छ । बजारिया पेय पदार्थमा पनि फ्रुक्टोसिरफ भन्ने हालेको हुन्छ, यसलाई मेडिकल साइन्सले विषै मान्छ । किनभने, भोलि त्यो जम्मा भई फ्याटमा परिवर्तन भएर हामीलाई दुःख दिन सक्छ ।
हामी आफैं पनि शरीरको अनुगमन गर्न सक्छौं । अचेल मधुमेह नाप्ने यन्त्र ग्लुकोमिटर पनि सस्तैमा पाइन्छ । बेला–बेला सुगर चेकजाँच गरिरहनुपर्छ । त्यस्तै, कोलेस्ट्रोल र ब्लड प्रेसरको चेकजाँच गरिरहनुपर्छ । औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्छ । पछि गएर अन्धोपन नहोस्, मुटुरोग, यौन दुर्वलता आदि नहोस् भनेर औषधि दिइएको हुन्छ । त्यसलाई नियमित गर्नुपर्छ ।
हामीले हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार पुष्पाञ्जली अस्पतालमा मधुमेहको परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेका छौं । सो दिन मधुमेह परीक्षण गर्न आउनेको संख्या सयौं छ । त्यस्तै हरेक महिना एउटा समुदायमा मधुमेहसम्बन्धी चेतनामूलक अभियान गर्ने गरेका छौं । त्यस्तै यसको चेतना बढाउने उद्देश्यले कार्यरत नर्स र प्लस टुमा साइन्स पढ्नेहरुलाई मधुमेहसम्बन्धी हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता पनि गरेका छौं । त्यस्तै बिरामीहरुमा मधुमेहसम्बन्धी वक्तृत्वकला प्रतियोगिता पनि ग¥यौं ।
(श्री पुष्पाञ्जली अस्पतालका प्रमुख डा. अधिकारीसँग विनोदबाबु रिजालले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको)